Khan: Reer Galbeedka xorriyada hadalka uguma soo gamban karaan gefka Nabi Maxamed
Khan: Xorriyada hadalka looguma soo gamban karo gefka Nabi Maxamed
By WARIYAHA ARRIMAHA DIINTA , GAROWE ONLINE
Ra'iisul Wasaaraha Pakistan ayaa hogaamiyeyaasha wadamada Islaamka si kulul u canaantay | Xuquuqda Sawirka: Online
MAKKA, Saudi Arabia – Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan, Imran Khan, ayaa wuxuu si adag uga hadlay xadgudubyadda sanadihii u dambeeyay ee dadweynaha reer Galbeedka kula kacayeen Nabi Maxamed NNKH.
"Sidda uu isaga [Nabiga] ugu nool yahay quluubteena, waa in aan u sharaxnaa Reer Galbeedka in ay tahay mid sareysa iyo in ay na xanuunjineyso markay ku jees jeesayaan ama ay ku maadeysanayanaa Nabigeena barakeysan," ayuu yiri.
Ururka Iskaashiga Islaamka ee OIC oo uu ku canaantay in ay markay timaado ficilada noocaasi ah uusan talaabo qaadin ayuu ku booriyey in Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub ay kala xaajoodaan qadiyadani.
"Waxaan rabaa in aan fursadaan uga faa'ideysto in Jamciyada Qurumaha ka dhaxeysa iyo Midowga Yurub aan u sharaxno in xorriyada hadalka aan loogu soo ganban karin dhaawaca qalbiyadda 1.3 milyan oo ruux," ayuu raaciyey.
Mr Khan oo sii hadlaya ayaa ka dhiidhiyey dhacdooyinka Islaam naceybka ee dunida kusoo badanayay sanadihii lasoo dhaafay, isaga oo ku dhaleeceeyay reer Galbeedka in ay isku milaan argagixisinimada iyo Islaamka.
"Diinta ma ahan argagixisnimo. Diinna ma ogola in la dilo dad aan waxba galabsan. Tani ayaa keentay Islaam naceybka. Haatan dunida waxaa looga qeexaa argagixisada Islaamka-xagjirka ah," ayuu daba dhigay kalmadiisa.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku nuux-nuux saday sida loo baahan yahay midnimada dowladaha Islaam-ka si loosoo afjaro meelna looga soo wadajeesto "falalka Islaam ka naceybka iyo Islaam-ka xagjirka ah".
"Waxaan metalnaa shucuub badan oo Muslimiin ah. OIC waa in ay doorkeedu qaadataa. Waa in aan kheyraad badan ku bixinayaa sidii aan gacanta sare u lahaan lahayn dhanka Tiknoolajiyada iyo Seyniska," ayuu kusoo xiray.
Imran Khan: Xijaabka wuxuu noqday hubka Islaam-naceybka
Caalamka 28.09.2019. 09:30
Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan ayaa wuxuu ka digay sii socoshada "gefka ka dhanka ah" Diinka Islaamka iyo Nabi Maxamed.
Imran Khan oo loo dhaariyay xilka Ra'iisul Wasaaraha Pakistan
Caalamka 18.08.2018. 16:08
Farmaajo oo ka hadlay doorashada Pakistan iyo guusha Imran Khan
Soomaliya 18.08.2018. 12:06
Ku dhowaad 20-kun wadaado Tabliiq ah oo karantiil la geliyey
Caalamka 05.04.2020. 19:30
Pakistan oo cabsi ka qabta in India kusoo duusho, warqadna u dirtay QM
Caalamka 19.12.2019. 17:10
India oo duqeyn ka fulisay gudaha Pakistan
Caalamka 26.02.2019. 16:32
Maxbuus u dhashay Pakistan oo dhagax lagu dilay gudaha Xabsi ku yaalla India
Caalamka 20.02.2019. 23:48
Diyaarad uu la socday ra'iisul wasaare oo si degdeg loosoo dejiyay
Caalamka 29.09.2019. 20:30